UGoretti Irisarri noJose Gil Romero. Udliwanondlebe nababhali beLa traductora | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 11/09/2021 12:00 | Ukuhlaziywa ukuba 12/09/2021 09:18 | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi
Iprofayile ye-Twitter yababhali.
UGoretti Irisarri noJose Gil Romero Baye baba sisibini sokuyila ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini kwaye bapapasha izihloko ezinje nge-trilogy Bonke abafileyo (yenziwe nge Ukudubula kweenkwenkwezi kuwa, Inkqubo yeMfihlo kunye neSixeko esiFihliweyo), njengokuba. Umguquleli Yincwadi yakhe yamva nje kwaye iphume kule nyanga nje. Ndiyabulela kakhulu ixesha lakho kunye nobubele bokundingcwalisela olu dliwanondlebe-ndlebe kwaye kubonisa ukuba ngokuqinisekileyo benza kakuhle.
UGoretti Irisarri noJose Gil Romero-Udliwanondlebe
UNCWADI NGOKU: Umguquleli yinoveli yakho entsha. Usixelela ntoni ngayo kwaye uvela phi umbono?
JOSE GIL ROMERO: Iinoveli zino Yintoni enokwenzeka kulibaziseko lwemizuzu esibhozo ngayo Uloliwe kaFranco yafika ngo Ukudibana ne-hitler eHendaye. Ukusuka kweso siganeko sokwenyani siphuhlisa ibali lothando kunye ne-suspense, eneenkwenkwezi kumguquleli, umfazi ongenasibindi, ofuna ukuhlala ngoxolo kuphela, kwaye ngubani obandakanyeka kwicebo lobuntlola.
UGORETTI IRISARRI: Sasichukunyiswe ngumbono wokubeka umlinganiswa ophambili ephila kakhulu kumayelenqe kuloliwe ohamba ngesantya esiphezulu, ngumfanekiso bhanyabhanya kwaye saye sacinga ngoko nangoko Hitchcock, kwezi bhanyabhanya uqala ukuzibona kwaye azikuvumeli ukuba uhambe.
GI: Kwimeko yam ndiqale ngeTolkien, IHobbit, okanye ubuncinci yincwadi yokuqala endiyikhumbulayo. Kwakunjengokufumanisa ichiza kwaye andizange ndiyeke.
JGR: Funda mhlawumbi enye incwadi ye Abahlanu, eyayiza kuba nodadewethu eshalofini. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo oko kwaphawula ubuntwana bam, kwaye ndingatsho ukuba ubomi bam, yayingu Hom, nguCarlos Giménez xa sinolwazi. Kwaye ubhale ... ngokuqinisekileyo i Iskripthi yenye yezo zihlekisayo endandizobe ndiselula, Ayengamabali owoyikisayo aneerhamncwa, aphenjelelwa kakhulu yi Abahlali nguJames Cameron kunye neziphumo ezizodwa zeemovie zikaDavid Cronenberg.
JGR: UGore ufundeka ngakumbi kunam (ehleka). Kodwa zininzi kakhulu ... UGarcía Márquez kunye noGaldós, Horacio Quiroga kunye noStefan Zweig, UPerez Reverte kunye noEduardo Mendoza, Bukowski...
GI: ndizophula umkhonto ngamantombazana. Ndabeka isandla sam emlilweni ngayo nayiphi na into evela ku-Sei Shonagon, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, uSusan Sontag okanye i-surfer eyaziwayo, Agatha Christie...
GI: Ngokuzimisela, uAgatha waye ubuvulindlela be-surfKukho imifanekiso yakhe emnandi ngebhodi ebamba amaza.
JGR: Ndingathanda ukudibana umfokazi Ingaba ufuna ntoni Umtsalane.
GI: Umbuzo olungileyo! Ewe ndingathanda yenza kwi inomdla kakhulu Umlawuli we Enye into ejijekileyo. Kwaye ngokwazi ... Ukapteni nemo, kwaye undithathele ukhenketho oluncinci kumazantsi echweba laseVigo, ekubonakala ukuba lalilapho.
GI: Ngaphambi kokuchwetheza ukukhangela imifanekiso. Ukufika kwindawo entsha kufuneka ndibone imifanekiso ndibeke kumxholo, izimvo zokunxiba ezihlekisayo, ubuso obuthile.
JGR: Ukufunda, akukho nto ithi qatha engqondweni ngoku ... kwaye jonga, ndiyindoda! Ewe, jonga: Ndidla ngokuthenga izinto ezininzi, Ewe, andinakukunyamezela ukufumana omnye umntu ekrwelele incwadi. Amehlo am aya kule mihlathi ukuba enye ifumene umdla kwaye iyandiphazamisa, iyandiphazamisa. Ndathi, i-maniac (ehleka).
AL: Kwaye loo ndawo ikhethiweyo kunye nexesha lokwenza oko?
JGR: Ukufunda, ngaphandle kwamathandabuzo ngaphambi kokulalakwi ibhedi.
GI: Ndinencasa ejijekileyo yokufunda apho kukho ingxolo eninzi, njengangaphantsi. Ndiyayithanda ingcinezelo endinyanzelayo, ndibhaptiza ngakumbi.
GI: Ndiyithanda kakhulu le nto ibizwa ngokuba literatura zohlobo, ukufunda nokubhala kokubini. Ukuyibhala kulungile ukuba kukho imithetho ekutshixayo, ukusikelwa umda okunjengoko kuchaza uhlobo. Ngokuyilayo isebenza ngcono kakhulu. Kukho uxwebhu olubhalwe nguLars von Trier, Iimeko ezintlanu, eyicacisa kakuhle: IVon Trier icela umngeni kumbhali wefilimu emfutshane ukuba adubule ezintlanu uyabuyisa Ngokufutshane, kwaye ngalo lonke ixesha iyakubeka imeko enzima, engenakwenzeka ngakumbi. Kodwa eyona nto yoyikisayo kuxa uLars Von Trier emxelela ukuba ngeli xesha akabeki miqathango kuyo: ushiya umbhali olihlwempu engakhuselekanga phambi kwalasha, wenkululeko epheleleyo.
I-JGR: Zininzi iintlobo ezahlukeneyo, kodwa… ewe, enye into oyithandayo: Kunqabile ukuba ndifunde uncwadi olungeyoSpanish. Kuyandoyikisa ukucinga ukuba inguqulelo endiyifundayo ayizukugqibelela kwaye oku kuya konakalisa ukufunda kwam. Ingcinga ye-neurotic, ndiyazi, kwaye bendonwabile ukuyichaza kumlinganiswa ovela Umguquleli, ethi into enje "andiwuthembi umgangatho woguqulo endiza kulifumana."
GI: ndiyafunda Indlela yeemvakalelo yaseMadrid, de UCarrere, Ipapashwe kwakhona nguLa Felguera. U-Emilio Carrere, umbhali we Inqaba yesixhenxe yokuzingela, Wayengumlinganiswa owahlukileyo, imbongi eguqukayo kunye ne-bohemian, eyathi emva kwemfazwe yamkela ulawulo lukaFranco. Ungomnye wabo bantu bokubhala abanemibono engekho lula ukuyibhala. Vula Umguquleli uphuma efunda umbongo kwirediyo, apho wayedume khona. Umbongo uyindumiso kumaNazi angena eParis, IParis phantsi kweSwastika.
Sasinomdla kakhulu wokubonisa loo ndawo ishushu yexesha, xa yonke into yayingacacanga ngoku kwaye kukho iingqondi ezazithanda ubuNazi. Umzekelo, bekukho umboniso omkhulu eCírculo de Bellas Artes kwincwadi yesiJamani, ekwavela kwinoveli. Ngapha koko, kukho ezo foto zineeswastika ezinkulu ezixhonywe kwiindonga zeSangqa ... Ibali yilento liyiyo.
JGR: Ndiyafunda Igorha elinewaka lobusonguCampbell. Ndikuthanda kakhulu ukuziqhelanisa. Ndifunde okuninzi malunga neendlela zokubalisela kwaye, ukubona ukuba ndifunda kancinci (ukuhleka)
Malunga nokubhala kwethu, Sisandula ukugqiba inoveli kwaye sanelisekile. Siyathemba ukuba singanika iindaba malunga nokupapashwa kwayo, kungekudala.
JGR: Ewe, ndingatsho ngcono kunakuqala kwaye ndingatsho kakubi kunakuqala. Ndiyathetha ukuba ipapashwe kakhulu, kakhulu, kodwa kwiimeko zedraconia: Ixesha lokuxhaphaza lifutshane kakhulu kwaye ukhuphiswano lukhohlakele. Baninzi abantu abalungileyo ababhala iincwadi ezinkulu kwaye umfundi akanalo ixesha kunye nokukwazi ukuzikhetha. Uninzi lwabenzi bobubi bayanyamalala endleleni okanye abayenzi. Kwaye kuyothusa ukucinga ukuba bangaphi abantu abanetalente abaphaya, abachithiweyo.
GI: nam ndiyacinga indlela entsha yeentsomi eziviwayo nezibukelwayo inzima kakhulu, ngakumbi uthotho lweTV, eziye zangaphezulu zoncwadi kwaye zithatha unonophelo olungakumbi kuphuhliso lwabalinganiswa okanye ukuphononongwa kwamabali. Kwaye zi ukhuphiswano olomeleleyo, kuba ixesha olichitha ubukele izahluko kunye nezahluko zoluhlu awuchithanga ekufundeni.
JGR: La ngamaxesha anzima. Baninzi abantu abasokolayo okanye abasokolayo. IpheKwicala lethu, sinokuzisa isiqabu esithile, indlela encinci yokuphuma kobo bunzima. Ezinye zezinto ekuthethwa ngazo kwi Umguquleli nayo: ukusuka indlela yosindiso ezithi iincwadi masizenzele abantu kwaye, ngaloo ndlela, inoveli irhafu kuncwadi. Ndiyathemba ukuba, nokuba lithuba nje elincinci, abafundi bethu baya kubaleka babulele kuthi. Ingayinto entle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UGoretti Irisarri noJose Gil Romero. Udliwanondlebe nababhali beLa traductora